सशस्त्र प्रहरीका ३ एआईजीको सरुवा, को कहाँ पुगे? - Everest Dainik - News from Nepal
सशस्त्र प्रहरीका ३ एआईजीको सरुवा, को कहाँ पुगे?
काठमाडौं, साउन १९ । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा गरेको छ। सरुवा हुनेमा पुष्पराम केसीलाई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागबाट प्रतिष्ठानतर्फ, नारायणबाबु थापा मानव स्रोत विभागबाट सीमा सुरक्षाबलतर्फ र रामशरण पौडेललाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधानकार्यालयमा पठाइएको छ।
यस्तै सरकारले स्थानीय तहको उप निर्वाचनको मिति मंसिर १४ गते तोकेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको खाली सिटका लागि निवार्चन आयोगको परामर्शमा मंसिर १४ गते निर्वाचन हुनेछन्।
यस्तै झुठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएका आठजनाको नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। नागरिकता रद्द हुनेहरुमा अशोक शाह, बिन्दे महतो, नातादेवी महतो, सुशील महतो, राजेन्द्र महतो, सुशील महतो, उपेन्द्र महतो,रामकिशोर महतो र राजकिशोर महतो छन्।
याे पनि पढ्नुस जेठ १८ सम्म उडान बन्द, भोलि साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय
ट्याग्स: मन्त्रिपरिषद् बैठक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक